Jireenya Archives - Ibsaa Jireenyaa
November 3, 2021 Sammubani Leave a comment
Rakkoo booda tolti ni dhuftiAkkuma beeknu jiruun addunyaa iddoo qormaatati. Yeroo garii toltuun qoramna, yeroo biraa immoo rakkooleen qoramna. Dhugaa kanaa Qur’aana keessatti haala kanaan arganna: “Lubbuun hundi du’a ni dhandhamti. Isin qormaatuuf hamtuu fi wanta gaariin isin mokkorra. Garuma Keenyatti deebifamtu.” Suuratu Al-Anbiyaa 21:35Rakkooleen nama qunnaman rakkoolee waligalaa (aamma) fi rakkoolee dhuunfaa (khaasa) jechuun bakka lamatti qoodun ni danda’ama. Rakkooleen wal-galaa rakkoo hawaasa guutuu qunnamaniidha. Kan akka kirkira lafaa, lolaa, hoonge, waraana, dhibee daddarbaa, fkn, koronaa, fi kkf. Kanniin keessaa tokko hawaasa keessatti yoo argame, kalattinis ta’i alkallattin nama hunda miidha. Rakkooleen dhuunfaa immoo rakkoo nama dhuunfaa qunnamuudha. Kan akka hiyyummaa, dhibee saffisaan hin daddarbine fi kkf dha. Rakkoon kuni namuma tokko ykn miseensa maatii qofa miidhu danda’a.Yeroo rakkooleen nama qunnaman namoonni dhama’iinsa guddaa keessatti lixu. Gara deeman wallaalu. Rakkoolee lamaan armaan olii keessaa rakkoon waraanaa biyya teenya muudataa jiru rakkoo wali galaa nama hundaa tuquudha. Kanaafu, qormaata kana keessaan darbuuf maaltu namarraa eeggamaa? Mee kitaaba kana haa ilaallu: https://sammubani.files.wordpress.com/2021/11/galaana-fitnaa.pdf
October 23, 2021 Sammubani 4 comments
Kitaabni “Yaadaa fi Milkaa’inna” jedhu, tarkaanfilee kudhan miira mirqaansu jabaatiin nama sochoosun gara milkaa’innaatti nama qajeelchu ibsa…. Nama qalbii isaa jaalala milkaa’innaatiin qabsiisuu barbaade hunda dubbisa.
October 4, 2021 Sammubani One comment
Yoo facebook achumaan badee hafe karaa telegraamiitiin hanga danda’ameen ergaa walii dabarsina. Kanaafu, t.me/sammubani tuquun itti dabalamaa.
May 25, 2020 Sammubani Leave a comment
Dhugumatti, boqonnaa, tasgabbii fi gammachuu qalbii argachuun, yaaddoo fi dhiphinni qalbirraa deemun wanta namni hundu barbaadudha.Namoota keessaa nama sababoota gammachuu baay’ee argatee jireenya gammachuu fi gaarii jiraatetu jira. Ammas, isaan keessaa nama sababoota kanniin dhabee jireenya dararaa jiraatetu jira. Ammas, isaan keessaa hamma Rabbiin isa milkeessen nama jiddu-galeessa ta’etu jira. Mee tarkaanfilee gammachuutti nama geessan ilaalu itti haa fufnu
March 28, 2020 Sammubani Leave a comment
Addunyaan tuni akkanumatti uumamte tan dagatamte osoo hin ta’in seera ittiin bulmaataa qabdi. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa addunyaa tana keessa seerota Isaa hin jijjiramne kaa’e jira. Namni seerota kanniin beekee itti bulee, rakkoo fi adabbii hangana hin jedhamne keessaa baha. Namni kana dide immoo rakkoo fi adabbii cimaaf of saaxila. Dhibeen koronaa yeroo ammaa addunyaa haguuge kuni seera Rabbii olta’aa kan hordofuudha. Sababni isaas, vaayrasini kuni wanta lubbuu qabu waan ta’eef Rabbiitu isa uume, seera Isaatiif masakama. Kanaafu, mee har’a madda sirrii irraa seera kana haa barannu.